I-CMO-on-the-Go: Abasebenzi beGig banokuLizuza njani iSebe lakho lokuThengisa | Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 20, 2018 NgoMvulo, Matshi 19, 2018 URenae Scott
Umyinge we-CMO ungaphaya kweminyaka emi-4-Imfutshane kwi-C-suite. Ngoba? Ngoxinzelelo lokufikelela kwiinjongo zengeniso, ukudinwa kuya kuba yinto engenakuphepheka. Kulapho umsebenzi we-gig ungena khona. Ukuba yi-CMO-on-the-Go kuvumela iiNtloko zeNtengiso ukuba zibeke ishedyuli yazo kwaye zithathe kuphela into eziyaziyo ukuba ziyakwazi ukujongana nazo, zikhokelela kwimisebenzi ekumgangatho ophezulu kunye neziphumo ezingcono kumgca osezantsi.
Nangona kunjalo, iinkampani ziyaqhubeka nokwenza izigqibo ezinobuchule ngaphandle kwesibonelelo sombono we-CMO, ngaphandle kobuchule ekukhuleni kwengeniso yenkampani abayizisayo etafileni. Kulapho abasebenzi be gig abakwinqanaba eliphezulu beza kudlala khona. Banokusebenza njenge-CMO yeemveliso ngexesha lesingxungxo, ukugcina uphawu lwendleko zokuqesha i-CMO eya kuthi ibe khona kangangeminyaka embalwa.
Igiginal ye-CMO gig yahlukile ekubeni ngumcebisi; kubandakanya ukusebenzisana ne-C-suite kunye neebhodi njengenxalenye yeqela, ngokudityaniswa okunzulu kwimisebenzi yemihla ngemihla. Njenge-CMO ethatha inxaxheba kuqoqosho lwe-gig, ndinoxanduva lokujonga ezo ze-CMO ngokusisigxina. Ndikhokela amaqela okuthengisa ukufezekisa iinjongo zesicwangciso kunye nokunika ingxelo kwi-CEO. Ndenza nje oku ngokwamaqhezu. Njengabasebenzi abaninzi bezoqoqosho lwe-gig, ndifumene imisebenzi ngenethiwekhi yonxibelelwano endiyenzileyo xa bendikwindlela yemveli yokusebenza ngakumbi, kubandakanya nokuba yi-CMO yamaqhekeza ka-Abuelo, iSebe leCookie nabanye.
Kutheni abasebenzi beGig?
Omnye wemibuzo ebuzwa rhoqo endibuzwayo yile: Zisa ntoni abasebenzi be-gig kumasebe okuthengisa? Isibonelelo esinye esikhulu kukuba umsebenzi we-gig uzisa ukuqonda okutsha xa ejoyina iqela labasebenzi bexesha elide. Eli lungiselelo lihambisa ezona zinto zibalaseleyo kwihlabathi liphela- "amehlo amatsha" kulutsha kunye nolwazi lweziko kwiqela elipheleleyo.
Ngoku ka I-PayScaleUmvuzo ophakathi we-CMO uyi- $ 168,700. Iinkampani ezininzi, ukuqala ngokukodwa, azinakho ukuqesha umntu ngalo mvuzo ngokusisigxina, kodwa igig CMO inokuzisa iminyaka efanayo yamava kunye nobunkokeli ngexabiso eliphantsi kakhulu. Ukuba iqela lokuthengisa ngokusisigxina liyasichasa isilingo sokuphatha i-gig CMO njengomntu wangaphandle kwaye ibandakanya ixesha elisisigxina kuzo zonke izigqibo ezifanelekileyo, inkampani iya kufumana isibonelelo esipheleleyo sobuchwephesha obunamava kwaye obufezekisiweyo ngaphandle kwethegi exabisekileyo.
Olunye uncedo kukuba amalungiselelo egig anokuvumela iinkampani kunye nabaphathi ukuba bavavanye ukuqhuba ubudlelwane obungapheliyo. Ngelixa abasebenzi abaninzi be-gig (njengam) benelisekile ngokusebenza kwisivumelwano kwaye baxabisa ubhetyebhetye kunye nokwahluka, abanye banokukonwabela ukuza kwibhodi ngokusisigxina kwindawo efanelekileyo. Ulungiselelo lwegig luvumela omabini amaqela ukuba akuphonononge ngaphambi kokuzibophelela.
Iingcebiso nge-CMOs ukujonga ukwenza utshintsho
Ukuba uyi-CMO kwaye uqala ukuziva utshisiwe, kunokuba lixesha lokuphonononga indlela onokubuzisa ngayo ubuchule bakho bokuthengisa kwiinkampani ngokwesivumelwano. Fikelela kubalingane bakho bakudala kwaye ubazise ukuba unomdla kumsebenzi wegig. Ungalibali ukubandakanya abathengisi kuncedo lwakho-bahlala benombono wangaphakathi kwimibutho emininzi kwaye banokunika isikhokelo xa abaphathi bephuma kukhokelela kwisihlalo esivulekileyo.
Esinye sezithintelo eziphezulu esikhankanywe emsebenzini wokuzimela ingeniso engalindelekanga. Ngaphambi kokuba uthathe i-plunge, qiniseka ukuba ukulungele ukubuyela kwemali kunye nokuhamba okwenzeka ngokungathandabuzekiyo emsebenzini wokuzimela. Qiniseka ukuba uzilungiselele ngokwasemalini nangokweemvakalelo ukuze uqhubele phambili ngamaxesha anzima. Xa ingcali yentengiso ingena kuqoqosho lwe-gig ngamehlo avulekileyo, inokuba bubomi obanelisayo nobonwabisayo.
Xa imibutho yamkela izibonelelo zokuqesha abarhwebi abazimeleyo, ubudlelwane bunokuba yinzuzo macala. IiGig CMOs zinokubonelela ngolwazi olutsha, ubuchule obufikelelekayo kunye neempembelelo ezilungileyo kumgca osezantsi. Kwelinye icala, umsebenzi wegig unokuguquguquka, umsebenzi onomvuzo kunye nokudinwa okuncinci.
tags: igosa eliyintloko lentengisocmoI-cmo yokuqeshacmo ekuhambeniqoqoshoabasebenzi be-gig
Isicwangciso-qhinga sophawu oluqhubayo, umakhi weqela okhuthazayo kunye nenkokeli yesigqeba ebandakanyeke ngokupheleleyo ngobuchule obukhulayo bokuthengisa kunye neenzuzo zeempawu eziphambili zabathengi ngexesha lokunyuka kokhuphiswano kunye nokudodobala kwezoqoqosho. Onamava kuyo yonke iRestaurant, uFitness, kunye neeMpahla eziPhakathi. Izakhono zobunkokeli ezinamandla.